Ọdịdị Mgbanwe Ihu Igwe maka Florida Condo Collapse na-akpalite ihe egwu maka Osimiri Miami, njem, na nde mmadụ.
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Ọdịdị Mgbanwe Ihu Igwe maka Florida Condo Collapse na-akpalite ihe egwu maka Osimiri Miami, njem, na nde mmadụ.
Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Hotels & Ebe ntụrụndụ • LGBTQ • Akụkọ okomoko • News • ndị mmadụ • Resorts • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Ala mmiri nwere ike ime ka ụlọ daa. Ebe ndị na-emebi emebi na South Miami Beach
Ebe a na-eme njem nlegharị anya na ụlọ maka nde mmadụ na mpaghara Miami Beach nọ n'ihe egwu nke ida. Nnyocha Dr. Shimon Wdowinski lekwasịrị anya na mmepe na ojiji nke usoro usoro usoro mbara igwe nke nwere ike ịchọpụta obere mmegharị nke ụwa. Ọ gwara Daily Mail na London, ọ maara ozugbo ụlọ ahụ dara ma gbuo ọtụtụ na Seaside, Florida.
Mgbanwe ihu igwe na ịrị elu Osimiri nwere ike ịbụ ihe kpatara ọdịda Florida Champlain Tower Condo ụlọ nwere ike ịdaba na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
FOnye prọfesọ na Mahadum International University bụ Shimon Wdowinski kwuru na ya maara n'otu ntabi ụlọ dara ada mgbe ọ nụrụ akụkọ ozi nke ụlọ Seaside Champlain Tower South Condo dị na Florida.
Hotellọ nkwari akụ atọ na ogige ndị ọzọ na-agba ọsọ na ọsọ ọsọ na Surfside, Park View Island, na South Miami Beach na mpaghara Flamingo.
Ọkachamara prọfesọ Florida International Dr. Shimon Wdowinski amụọla akụkọ banyere ụlọ ahụ nke e bipụtara n'afọ gara aga nke gụnyere lainlọ Champlain na Surfside Florida. Ọ ghọtara ihe mere ụlọ ndị dị na Miami, Florida ji rụọ mmiri mmiri ugbu a.
Egwu ụgbọ mmiri na-apụ n'anya emeela ka ọtụtụ ndị mata ihe ize ndụ nke mgbanwe ihu igwe. Ala mmiri mmiri karịsịa — n’ikike ha nwere igbochi obodo ndị dị n’ụsọ oké osimiri idei mmiri na oké ifufe, na iwepụ mmetọ — na-enye nchebe ndị a pụrụ ifu n’ihu
Dabere na ọmụmụ ihe ahụ, ụlọ ụlọ Champlain Tower Condo na-agbada na ọnụego ihe dị ka milimita abụọ kwa afọ na 2s n'ihi na ọ na-anọdụ ala mmiri mmiri eweghachite.
Otu akụkọ ahụ rụtụrụ aka saịtị atọ ndị ọzọ na-emikpu na ọsọ ọsọ - ọzọ na Surfside, na Park View Island ebe enwere ụlọ na ụlọ akwụkwọ elementrị dị nso, na abụọ na ndịda Miami Beach na mpaghara Flamingo.
Nke a nwere ike ịbụ mmalite nke ọtụtụ ihe na-abịa maka mpaghara a na-ewu ewu, yana ụlọ ọrụ njem na njem na Southern Florida.
The Lainlọ Champlain Tower Condo na Surfside dara ụbọchị atọ gara aga ma ọ nwere ike gbuo narị mmadụ ma ọ bụ karịa bụ ndị a na-akọ ugbu a na-efu n'ime mkpọmkpọ ebe.
Osimiri Miami na mmiri na-agba mmiri Wetland
Mgbanwe ihu igwe dị adị.
Dr. Shimon Wdowinski nwetara BSc na Earth Sciences (1983) na MSc na Geology (1985) site na Mahadum Hibru (Jerusalem, Israel) na MS na Injinịa Injinịa (1987), na Ph.D. na Geophysics (1990) site na Mahadum Harvard. Ọ duziri ọmụmụ akwụkwọ postdoctorate na Scripps Institution of Oceanography (1990-1993); rụrụ ọrụ otu afọ na Geological Survey of Israel (1993-1994); jere ozi afọ iri dịka ngalaba na Ngalaba Geophysics na Planetary Sciences, Mahadum Tel Aviv, nke mbụ dị ka onye nkuzi (osote prọfesọ, 1994-1998) wee bụrụ onye nkuzi klaasị (onye prọfesọ na-akpakọrịta, 1998-2004); ma jee ozi ruo afọ iri ọzọ na Ngalaba Na-ahụ Maka Mmiri na Geosciences, Mahadum nke Miami, nke mbụ dị ka onye prọfesọ na-eme nchọpụta na-akpakọrịta (2005-2016) wee bụrụ prọfesọ nyocha (2015-2016). O sonyeere Ngalaba nke andwa na Gburugburu Ebe Obibi, Florida International University, na 2016 dị ka onye ọka mmụta na-agbatị ume.
Nnyocha Dr. Shimon Wdowinski lekwasịrị anya na mmepe na ojiji nke usoro usoro usoro mbara igwe nke nwere ike ịchọpụta obere mmegharị nke ụwa. O tinyela usoro ndị a nke ọma iji mụọ efere tectonic, ala ọma jijiji, ụtụ ala, ọrụ mmiri, mmiri mmiri, mgbanwe ihu igwe, na ịrị elu oke osimiri.